Al-shabaab oo sheegay in ay markasta heegan kaga jiraan weerarada ay fuliyaan reer galbeedku – Radio Daljir
Al-shabaab oo sheegay in ay markasta heegan kaga jiraan weerarada ay fuliyaan reer galbeedku
Oktoobar 8, 2013 5:21 b 0
Baraawe, October 8, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa ka jawaabay mar kale weerarkii ay ciidamada Maraykanka ku soo qaadeen xeebta degmada Baraawe ee shabeelaha hoose, halkaas oo lagu beegsanayey xubno ka tirsan ururka oo aad loo raadiyo.
Afhayeenka dhanka dagaalada ee ururka Al-shabaab Sheikh Cabdicasiis Abu Muscab oo saxaafada la hadlay, ?waxaa uu sheegay in ay Al-shabaab heegan kaga jiraan weerarada dalalka reer galbeedka ay inta badan soo qaadaan.
Waxaa uu sheegay Abu Muscab in xataa Maraykanka iyo xulufadiisa ay ogyihiin in ay heegan ku jiraan Al-shabaab oo mar kasta diyaar u yihiin dagaalka cadowga, waxaa uu xusay in aysan dhinacooda marnaba ka jirin habacsanaan.
?Cadowga markasta guul darro ayey la kulmi doonaan, nagama guulaysan doonaan ciidamo shisheeye oo dalkeena soo weeraray.? Ayuu yiri Abu Muscab.
USA waxay sheegtay in weerarkii dhowaan ee Baraawe la beegsadeen guri uu ku jiray hugaamiye u dhashay Kenya oo la yiraahdo Cikraama, kaas oo loo badinayo in uu lug ku lahaa fikarada weerarkii Westgate mall ee Nairobi, balse howl-galka waxaa lagu dilay xubno ka tirsan shabaab.
Puntland oo shaacisay 34 shirkadood oo ku tartamaya dhismaha garoonka Boosaaso (Dhegeyso)
Madaxweynaha Jubba oo beesha caalamka ka dalbaday in lagala shaqeeyo adeegyada bulshada